Ukubuyekezwa Kokuqala Kwe-'Halloween Kills 'Kufikile - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ukubuyekezwa Kokuqala Kwe-'Halloween Kills 'Kufikile
by UTrey Hilburn III September 11, 2021
by UTrey Hilburn III September 11, 2021 5,261 ukubukwa
I-Halloween Iyabulala ihlolwe kwiVenice Film Festival futhi yahlangatshezwa ngokugeza kokungabi nalutho okuncane ngezindlela zokuhle. Ngakho-ke, ukunganaki okuningi empeleni, ukuthi kwangikhathaza kancane. Imvamisa ngithatha lezi zinto ngohlamvu lukasawoti kepha inani elikhulu labantu ebelingakangeni kulo liyamangaza.
Ngemuva kokukhonjiswa inqwaba yamaTweets ithululiwe lokho okuphakamise kakhulu ukuthi ifilimu ibiyimbudane jikelele. Ngokuzimisela, basebenzise i- "mess". Igama livele kakhulu. Kanjalo "nomfana ongumlandeli" kanye "nensizakalo yabalandeli".
Bheka izindlela zayo ezinhle ukubona ukunqekuziswa okumbalwa kwamafilimu eza ngaphambili, kepha uma ifilimu iba ukuphinda kubhalwe kabusha kokuqukethwe ukuze kugcwaliswe amahora ama-2 ngama-wink njalo, akuyona into esiyifunayo.
Kubukeka sengathi kunokusabela okuningi okushiwo ukuthi izigxobo azikho nje nokuthi lokhu kwenza okuncane ukuhambisa ukulandisa kukaStrode noMyers. Izindaba ezimnandi ukuthi abaningi balaba bantu bathi isibalo sokubulala siphezulu impela nokuthi isigebenga asiphelele. Ngakho-ke, okungenani singakulindela lokho.
Izingqikithi zosizi nokuhlukumezeka kanye nokucabanga kwezixuku ezingenangqondo nazo zibonakala zihamba phambili kulokhu kusabela.
Ngasohlangothini olubi futhi, amaphuzu amaningi abekwe ebangeni le-2.5 futhi abone ambalwa we-1 kwaba-5. Kube khona abambalwa kwabane kwabanhlanu kodwa abenele ukunikezela ngokuphelele ngezixwayiso ezikhathazayo.
Esinye sezitatimende esikhathaza kakhulu nesibonakala sikhonjiswa ezibuyekezweni eziningi sifike kuDavid Rooney waseHollywood Reporter othe, "Lesi sitolimende sakamuva sifana nesifihla-buso se-latex ghoul eseluleke kakhulu futhi esingenabumba asisahambisani."
Angikwazi ukuzibamba kodwa ngizwe ukuthi iVenice bekuyindawo engafanele ukuthi umuntu obulele abulale. Akuzwakali lokho, kepha angikwazi kodwa ukusiza ukukuzwa lokho I-Halloween Iyabulala ngabe wenze kangcono kakhulu emcimbini wohlobo, njengoFantasia noma uFantastic Fest.
Ingabe lokhu kusabela okungathandeki kokuqala kuyakukhathaza? Uzokwazi ukuzibonela lapho I-Halloween Iyabulala ushaya amathiyetha kusukela ngo-Okthoba 15.